Budata Call of Duty: Vanguard maka Windows
Budata Call of Duty: Vanguard
Budata Call of Duty: Vanguard,
Oku ọrụ: Vanguard bụ egwuregwu FPS (onye na-agba ụta nke mbụ) nke egwuregwu Sledgehammer meriri. Vanguard, egwuregwu nke iri na asatọ nime usoro oku nke ọrụ, ga -apụta na PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X/S nyiwe na Nọvemba 5. Na -agba akaebe mmalite nke ndị agha pụrụ iche na akụkọ akụkọ na -adọrọ adọrọ. Bụrụ onye ọrụ ndị agha pụrụ iche na egwuregwu ọtụtụ mmadụ na-akwụ ụgwọ adrenaline. Nweta crossover Zombies, nke ụwa ya gbasaa. Ejikọtara ya na Warzone, gụnyere maapụ ọhụrụ a ga -ewepụta ma emechaa nafọ a.
Budata oku ọrụ: Vanguard
Gburugburu WWII ị hụtụbeghị mbụ. Na -agba akaebe mmalite nke ndị agha pụrụ iche dị mkpa nke ga -agbanwe usoro akụkọ ihe mere eme, na -eme otu (Task Force One) gafee nọgbọ agha anọ dị mkpa na ọnọdụ mkpọsa imikpu. Bụrụ onye na-arụ ọrụ pụrụ iche pụrụ iche na ọtụtụ ihe ntanetị bara ụba na ntanetị nwere maapụ nhọrọ 20 na mbido. Kwadebe maka zombies crossover na mbara igwe gbasaa na nke mbụ nusoro. Na -emikpu onwe gị na oku ọrụ zuru oke: ahụmịhe Warzone nwere nnukwu maapụ ọhụrụ. Kwadoro site na igwe na-esote oku nke injin ọrụ ewepụtara na Warfare Modern, ọ bụ Kpọọ Ọrụ kacha jikọọ: Oku ọrụ Vanguard.
Mpaghara otu egwuregwu: Gbanwee ihu nke akụkọ ntolite. Nweta agha ahụ site na akụkọ jikọtara ọnụ nke ndị dike mba dị iche iche mejupụtara otu Task Force One wee tọọ ntọala maka ndị agha pụrụ iche ama ama. Nke a bụ oku nke ndị dike Vanguard:
Lucas Riggs nkeonwe, 20 Battalion, Australia 9th Infantry Division, British Eighth Army
Sergeant Arthur Kingsley nke 9th Parachute Battalion, Ndị agha Britain
Lieutenant Wade Jackson, Scouting Squadron isii, ndị agha mmiri nke United States
Lieutenant Polina Petrova nke 138th Rifle Division of the Red Army
Ihe odide anọ nwere ike ịtụ ọgụ ka ọ bụrụ otu nime ndị nnọchi anya nke ndị agha pụrụ iche nke ọgbara ọhụrụ na-alụ ọgụ maka mmeri nọgụ na-agbanwe ebili mmiri gburugburu ụwa. Kwadebe ime akụkụ gị iji gbanwee akara aka nke mmadụ na ọnọdụ dị ịtụnanya gbasara nnukwu ọgụ anọ nke WWII na akụkọ otu onye ọkpụkpọ. Lụọ ndị iro ọgụ na mpaghara ọwụwa anyanwụ na ọdịda anyanwụ nke Europe, lụọ ọgụ maka ụwa efu na Pacific na North Africa, ọgụ nkịta na Midway Islands, jiri mkpachapụ anya agbachitere Stalingrad, gbadata na France, fụpụ ndị agha na -aga nihu na North Africa.
Otutu: 20 Starter Maps na Ụzọ ndị ọzọ igwu egwu - Oku ọrụ Vanguard na -enye nnukwu ụbọchị otu ọtụtụ na mwepụta, yana maapụ 20, 16 nke e wuru maka egwuregwu isi, na mwepụta. Jikere maka ọgụ mgbapụta nke adrenaline na oke oku nke ọgụ ọgụ ka ị na-agbago nọkwa na njem gị ka ị bụrụ otu nime ndị ọrụ pụrụ iche izizi nọtụtụ gburugburu.
Egwuregwu Sledgehammer na-eweta ọgụ ọgụ onye mbụ na-agba ọsọ ọsọ wee na-enweta ume ọzọ na ọtụtụ ụzọ igwu egwu. Ndị a gụnyere Gunsmith na sistemu Caliber dị elu nke na-ewe gburugburu imikpu na nzaghachi na ọkwa ọhụrụ, yana ụdị egbe egbe ọhụrụ 2v2 nke izizi webatara na Agha Ọgbara ọhụrụ; Onye mmeri Hill. Chee echiche ngwa-ngwa, nso, obere ọgụ ebe otu asatọ na-asọ mpi nusoro egwuregwu isi na isi ebe otu ikpeazụ guzoro.
Zombies: Ahụmịhe jọgburu onwe ya, Ahụmịhe na -atọ ụtọ site na Treyarch - Oku nke ọrụ Vanguard na -egosipụta ụdị egwuregwu Zombies ọhụrụ nke Treyarch Studios mepụtara. Ahụmahụ na -arụkọ ọrụ na -aga nihu ma na -ejikọ akụkọ akụkọ Dark Aether, na -ekepụta echiche na -akpali akpali nke ukwuu ma na -ewepụtakwa egwuregwu egwuregwu nke ụdị a ma ama. Choputa ihe egwu a na -enweghị ike ịkọwapụta nke Zombies Black Ops Cold War ka ị na -agbanahụ mwakpo na -adịghị agwụ agwụ nke ndị nwụrụ anwụ na -eje ije.
Kpọọ Ọrụ: Vanguard na-akwado injin nke ọgbọ nke mbụ ewepụtara na Call of Duty: Warfare Modern, nke kachasị mma iji nye nrubeisi anya pụtara ìhè, ụwa fotorealistic, ezigbo agwa na ihe ngosi imikpu nke na-eme ka egwuregwu dị mma. Oku nke Ọrụ: Vanguard bụ ahụmịhe oku kacha arụ ọrụ ọfụma, yana ijikọ Warzone, ịgafe egwuregwu, ịga nihu na nkwado mkpụrụ ndụ ihe nketa site na ụzọ ọpụpụ.
Call of Duty: Vanguard Ụdịdị
Mmepụta: Sledgehammer Games